‎The Travelling Lion Podcast on Apple Podcasts
The Travelling Lion Podcas‪t‬ Thiha Lu Lin
028 :: [Audio Book] Thu Kha Myay Pon (Part - 3)
ဒီနေ့အတွက် ကျွန်တော့်ရဲ့ Podcast Episode (28) မှာတော့ ကျွန်တော် အထူးနှစ်သက်တဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ် ဖြစ်တဲ့ စာရေးဆရာ ချမ်းမြေ့ဝင်း ဘာသာပြန် "သုခမြေပုံ" ကို အသံထွက် ဖတ်ပြထားပါတယ်။ ဇာစ်မြစ် စာအုပ်ထုတ်ဝေရေး က ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ မှာ ထုတ်ဝေလိုက်တဲ့ စာအုပ်ဖြစ်ပြီး မူရင်းစာအုပ်ကတော့ Eric Weiner ရဲ့ The Geography of Bliss ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုတစ်ခါတော့ အပိုင်း (၃) အနေနဲ့ ဘူတန်နိုင်ငံ ကို ပျော်ရွှင်ခြင်း ရှာပုံတော်ခရီး ဖွင့်ခဲ့တာကို နားဆင်ကြရမှာပါ။ ဘူတန်ကို ကျွန်တော်လည်း အတော်စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ တော်ရုံလူ မလည်ပတ်နိုင်အောင် စရောက်တဲ့နေ့ကစလို့ တစ်ရက်ကို ဒေါ်လာ ၂၀၀ မဖြစ်မနေသုံးစွဲပေးရတဲ့ ထူးခြားတဲ့နိုင်ငံပါပဲ။ ဒါကြောင့်လည်း နိုင်ငံက ရိုးရှင်းအေးချမ်းမှု ရှိနေတာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ လေယာဉ်ဆင်းချိန် ကြုံရမဲ့ ဟိမဝန္တာတောင်ကြီးတွေနား လေယာဉ်ယိမ်းထိုးကပ်သွားတဲ့ ခံစားချက်ကို မြင်လည်းမြင်ချင် ကြောက်လည်းကြောက် ဖြစ်နေမှာ သေချာတယ်။ ဘူတန် ရဲ့ ထူးခြားတဲ့ ရိုးရာဓလေ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ အမျိုးသားလိင်အင်္ဂါပုံ ရုပ်တုတွေအကြောင်းကလည်း စိတ်ဝင်စားစရာပါ။ ကိုယ်တိုင်ရောက်ရှိနားလည်သွားခဲ့ရသလို ရေးသားတင်ဆက်ထားတဲ့အတွက် တစ်ထိုင်တည်းနဲ့ ဘူတန်နိုင်ငံ ရဲ့ နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ နဲ့ လည်ပတ်စရာတွေကို သိရှိလိုက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နားဆင်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။
| Website: https://www.thihathetraveller.com || Facebook: https://www.facebook.com/travellerthiha || Instagram: https://www.instagram.com/thihalulin || YouTube: https://www.youtube.com/thihalulin || Email me @ thihalulin@gmail.com |
027 :: [Audio Book] Thu Kha Myay Pon (Part - 2)
ဒီနေ့အတွက် ကျွန်တော့်ရဲ့ Podcast Episode (27) မှာတော့ ကျွန်တော် အထူးနှစ်သက်တဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ် ဖြစ်တဲ့ စာရေးဆရာ ချမ်းမြေ့ဝင်း ဘာသာပြန် "သုခမြေပုံ" ကို အသံထွက် ဖတ်ပြထားပါတယ်။ ဇာစ်မြစ် စာအုပ်ထုတ်ဝေရေး က ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ မှာ ထုတ်ဝေလိုက်တဲ့ စာအုပ်ဖြစ်ပြီး မူရင်းစာအုပ်ကတော့ Eric Weiner ရဲ့ The Geography of Bliss ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အပိုင်း (၁) တုန်းက နယ်သာလန် မှာ ပျော်ရွှင်ခြင်းရှာပုံတော်ထွက်တဲ့ ခရီးအကြောင်းကို နားဆင်ခဲ့ရပြီး အခု အပိုင်း (၂) မှာတော့ ဆွစ်ဇလန် မှာ ပျော်ရွှင်ခြင်းရှာပုံတော်ဖွင့်ထားပါတယ်။ ဆွစ်ဇလန်နိုင်ငံ ရဲ့ လူမှုရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး အကြောင်းအရာတွေကိုပါ ထင်ဟပ်ဖော်ပြထားလို့ ကိုယ်တိုင်ခရီးသွားလိုက်ရသလို နားလည်သဘောပေါက်စေပါတယ်။ တချို့ကိစ္စရပ်တွေဆိုရင် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ ပြန်ပြီးအသုံးချလို့ ရနိုင်မလားလို့ တွေးမိသွားစေတယ်။ မူရင်း စာရေးသူ Eric ရဲ့ အတွေးအခေါ် နဲ့ အတင်အပြ ထိရှလွန်းသလို ဆရာ ချမ်းမြေ့ဝင်း ရဲ့ ဘာသာပြန်မှုကလည်း ကွက်တိကျတယ်လို့ ဆိုချင်ပါတယ်။ ဆွစ်ဇလန်နိုင်ငံ ကို အလည်ရောက်ခဲ့ဖူးသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ စာထဲက အချက်အလက်တွေဟာ ငြင်းစရာမရှိလောက်အောင်ကို ဖြစ်ရပါတယ်။ နားဆင်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။
026 :: [Audio Book] Thu Kha Myay Pon (Part - 1)
ဒီနေ့အတွက် ကျွန်တော့်ရဲ့ Podcast Episode (26) မှာတော့ ကျွန်တော် အထူးနှစ်သက်တဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ် ဖြစ်တဲ့ စာရေးဆရာ ချမ်းမြေ့ဝင်း ဘာသာပြန် "သုခမြေပုံ" ကို အသံထွက် ဖတ်ပြထားပါတယ်။ ဇာစ်မြစ် စာအုပ်ထုတ်ဝေရေး က ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ မှာ ထုတ်ဝေလိုက်တဲ့ စာအုပ်ဖြစ်ပြီး မူရင်းစာအုပ်ကတော့ Eric Weiner ရဲ့ The Geography of Bliss ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာ့ရဲ့ ဘာသာပြန်ဆိုမှုအရေးအသားတွေဟာလည်း ဖတ်ရှုရသူကို အတော်လေး ဆွဲဆောင်သွားပြီး ခရီးထွက်ချင်စိတ်ကို တိုးစေပါတယ်။ စာရေးသူ ဟာ ခရီးသွားခြင်းကို စိတ်မဝင်စားသူ ဖြစ်ပေမဲ့ ရေးသားမှုတွေဟာ မြေပြင်အခြေအနေနဲ့ ကိုက်ညီအောင် ရေးဖွဲ့နိုင်တယ်လို့ ယူဆမိပါတယ်။ ခရီးသွားတာကို အရူးအမူးစွဲလန်းနေတဲ့ Travel Blogger တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဒီစာအုပ်ဟာ လက်ကမချချင်လောက်အောင် ဖြစ်ခဲ့ရတာမျိုး ကိုယ်ကြိုက်တဲ့စာအုပ် ကိုယ့်အသံနဲ့ ဖတ်ရွတ်ပြီး သိမ်းဆည်းဂုဏ်ပြုမိပါတယ်။ ခရီးသွားအကြောင်းအရာသက်သက်မဟုတ်ဘဲ၊ ပျော်ရွှင်နေတဲ့နိုင်ငံတွေဆီ ပျော်ရွှင်ခြင်းအရှာထွက်တဲ့ သူအကြောင်းဖြစ်တာမို့ ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားရပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်က ဘယ်နိုင်ငံတွေက ပျော်ရွှင်နေကြသလဲ၊ မပျော်ကြသလဲ၊ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတာတွေကို အသေးစိတ်ဖတ်ရင်း ဘဝဒသနများစွာလည်း ခံစားမှတ်သားရစေပါတယ်။ စာဖတ်ဖို့ အခက်အခဲရှိသူတွေ၊ အသံထွက်စာအုပ်တွေကိုနှစ်သက်သူတွေ သဘောကျနှစ်ခြိုက်ဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ စာအုပ်ထူတဲ့အတွက် အပိုင်းလိုက် ခွဲပြီး တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အခုကတော့ အပိုင်း (၁) ဖြစ်ပါတယ်။ နားဆင်ကြည့်ပါဦးခင်ဗျ။
025 :: [Travel] Domestic Tourism & Waste Problem Part (2)
ဒီနေ့ ကျွန်တော့် Podcast Episode (25) မှာတော့ ပြည်တွင်းခရီးသွား မြင့်မားလာတာနဲ့အမျှ ကြုံဆုံကြရမဲ့ အမှိုက်ပြဿနာ အကြောင်းကို ခရီးသွားလုပ်ငန်းမှာ ကျင်လည်နေကြတဲ့ လူငယ်တွေက အပြုသဘော ဆွေးနွေးအကြံပြုစကားဝိုင်း ဖန်တီးထားတာကို တင်ဆက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်အပတ်က အဆက်ဖြစ်ပြီး အပိုင်း (၂) မှာ ဆက်လက်ဆွေးနွေးကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Travel Blogger တွေက အမှိုက်ပြဿနာ ထိန်းသိမ်းဖို့ တာဝန်ရှိသလား
ကိုယ်ပိုင်ကား နဲ့ ခရီးသွားသူတွေက အမှိုက်ပိုဖွ သူတွေလား
နေရာသစ်တွေမှာ အမှိုက်ကျန်တဲ့ကိစ္စအတွက် အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းက ဘာလဲ
တစ်ကိုယ်ရည်သုံး ကျန်းမာရေးအကာအကွယ်ပစ္စည်းတွေ က အမှိုက်သစ် တွေ ဖြစ်လာပြီလား
စတာတွေကို ပြောပြပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အမြဲ အားပေးနားဆင်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
| Website: https://www.thihathetraveller.com || Facebook: https://www.facebook.com/travellerthiha || Instagram: https://www.instagram.com/thihalulin || YouTube: https://www.youtube.com/thihalulin || TikTok: https://www.tiktok.com/@thihalulin || Email me @ thihalulin@gmail.com |
024 :: [Travel] Domestic Tourism & Waste Problem Part (1)
ဒီနေ့ ကျွန်တော့် Podcast Episode (24) မှာတော့ ပြည်တွင်းခရီးသွား မြင့်မားလာတာနဲ့အမျှ ကြုံဆုံကြရမဲ့ အမှိုက်ပြဿနာ အကြောင်းကို ခရီးသွားလုပ်ငန်းမှာ ကျင်လည်နေကြတဲ့ လူငယ်တွေက အပြုသဘော ဆွေးနွေးအကြံပြုစကားဝိုင်း ဖန်တီးထားတာကို တင်ဆက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Social Media တွေပေါ် ရေးတင်တဲ့ ခရီးသွားအညွှန်းတွေ က အမှိုက်ပြဿနာရဲ့ အစ လား?
တကယ် အမှိုက်ဖွတာ ခရီးသွားလား၊ ဒေသခံတွေလား?
ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုပေးသူတွေနဲ့ ခရီးသွားတွေ အသီးသီးလိုက်နာရမဲ့ အမှိုက်တာဝန်များ
023 :: [Travel] How to explore in Aung Ban, Shan State
ဒီနေ့ ကျွန်တော့် Podcast Episode (23) မှာတော့ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းက ခရီးသွားတွေ ကျော်ကျော်သွားတတ်တဲ့ အောင်ပန်းမြို့ကို ခရီးရောက်ခဲ့တုန်း ကြုံခဲ့ရသမျှလေးတွေ ဝေမျှပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
အောင်ပန်းမြို့ ဖြစ်တည်လာပုံဘာနဲ့ ဘယ်လိုသွားမလဲဘယ်တွေ လည်ပတ်မလဲဘယ်မှာ တည်းခိုမလဲဘယ်မှာ စားသောက်မလဲ
saiarkar92 , 04/28/2020
Great podcast to follow for travel and other.